कतारमा २२ बर्षे नेपाली केटोलाई फाँसी ? भारतियलाई मारेको झुटो आरोप ! आमा बुवाको रुवाबासी « Np Online TV
कतारमा २२ बर्षे नेपाली केटोलाई फाँसी ? भारतियलाई मारेको झुटो आरोप ! आमा बुवाको रुवाबासी
काठमाडौं- नमस्कार म शिशिर भण्डारी..भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १५ का ढाका मोहन रानाभाटको घरमा यतिबेला ठुलो बज्रापात परेको छ । यो गरिब परिवार माथिआकाश खसेको छ । ३ बर्ष अगाडि आमा तपाईलाई सुख दिन्छु, बुवा अब हामी सधैं गरिबीमा बाच्नु पर्दैन, हाम्रा पनि खुशीका दिन आउंछ भनेर कतार गएको २२ बर्षको छोरा बिनोद रानाभाट यतिबेला कतारको जेलमा छन् । गर्दै नगरेको हत्याको आरोपमा बिनोद ३० महिनादेखि कतारको जेलमा नरकिय जीवन बिताईरहेका छन् । हामी नेपाली बिवधि समस्याले बिदेश जान्छौं । बिदेशमा गएर पनि अरुलाई सहयोग गर्न खोज्दा नमज्जाले फस्छौं । त्यस्तै भयो, बिनोद रानाभाटलाई पनि । जनरल क्लिनरमा काम गर्न कतार गएको केहि महिनामै एक भारतिय साथीलाई हस्पिटल लैजान लाग्दा उनी नै हत्याको आरोपमा जेल परे ।
बिनोद रानाभाटको परिवारको यो कारुणिक भिडियोलाई सबैले शेयर गर्नुहोला । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, इमो जहां जहां शेयर गर्नमिल्छ सबैतिर सेयर गरौं । जे नेपालमा आफ्नो देश, आमा र परिवार सम्झेर आंशु पिईरहेका मोहनलाई नेपाल झिकाउन मृतक भारतियको परिवारले २ लाख ६० हजार कतारी रियाल व्लड मनी मागेको छ । अर्थात नेपाली रकम ८२ लाख भएमात्र मोहनलाई देश फिर्ता गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली मिलेर सबैले सहयोग गरे, मोहन चांडै नै नेपाल फिर्ता हुनेछन् । यो परिवारको आंशुलाई हेरेर सबैले सहयोग गरौं । बिनोदलाई आफ्नै छोरानाती सम्झेर सबैले सहयोग गरौं । एउटा निर्दोष नेपालीलाई बिदेशमा फांसीको सजाय हुनबाट बचाऊं, म शिशिर भण्डारी सबैलाई दुई हात जोडेर बिन्ती गर्दछु । सहयोग गर्नका लागि बिनोदका बुवाको मोबाईल नं र खाता नं हामीले स्क्रिनमा र कमेन्टमा पिन गरेर राखेका छौं । हामी मार्फत् सहयोग गर्न म शिशिर भण्डारीलाई ९८११००६९२९ मा सम्पर्क गर्नुहोला, यो नं मा इमो, फाईबर दुईटै छ । फोन गर्न नसक्ने अवस्था छ भने म्यासेज छोड्नुहोला । आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने सबैले भिडियो शेयर गरेर सहयोग गर्नुहोला । सबैले नेपाली र नेपाली भाषी मनकारी नेपाली मांझ यो भिडियो सेयर गरि दिनु होला
नायिका वर्षा राउत र अभिनेता विनोद न्यौपानेले अभिनयको ‘झूठो खेल’
पूर्वी मोरङका विद्यालयमा कराँते सिक्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै!! सितेरियो करातेमा नेपाल कै 3rd डन पहिलो पल्ट मिडियामा (भिडियो)
कोहलपुर घटनामा घाइते प्रकृतिकी दिदी भक्कानिँदै भन्छिन : ‘मेरी बहिनी मलाई जस्ताको तस्तै चाहिन्छ
दिपिका पादुकोणको नया चलचित्र छपाकको ट्रेलर सार्वजनिक
लाईभ दोहोरी हेर्न गएका ‘भाईरल’ भीम विक, उनकै बारेमा दोहोरी गाएपछि…!!! (भिडियो)